पूल डिजाइन - ग्रेट पूल
किन पौंडी पोखरी बनाउने
पौंडी पोखरी निर्माणका लागि पौडी डिजाइन नियमहरु धेरै आवश्यक छ, र यो अपरिहार्य पनि भन्न सकिन्छ।
सामान्यतया, आर्किटेक्टहरू, सामान्य ठेकेदारहरू वा पोखरी निर्माणकर्ताहरूले मात्र उनीहरूका ग्राहकहरूलाई नराम्रो पोखरी योजनाहरू प्रदान गर्छन्। त्यसकारण, पौंडी पोखरीको निर्माण सामान्य ठेकेदारले मात्र गर्न सक्दछ। यस तरिकाले, तपाईंसँग निर्माण विधिहरू, सामग्री र उपकरणहरूको मामलामा धेरै विकल्पहरू हुन सक्दैनन्। तपाईंले ठेकेदारको मूल्यमा तपाईंको पूल निर्माण बजेटको लागि तिर्नु पर्छ।
यद्यपि GREATPOOL मा तपाईले पूल परियोजना बजेट नियन्त्रण गर्न सक्नुहुनेछ हामी तपाईका लागि बनाएका रेखाचित्र मार्फत। यो पाठ्यक्रम को लागी तपाइँ संचार गर्न केहि समय खर्च गर्न को लागी आवश्यक छ, तर हामी तपाइँलाई आश्वस्त गर्न सक्छौं कि यो लायक छ।
पढ्ने जारी राख्नुहोस् र हामी तपाईंलाई कसरी भाग लिने र कसरी तपाईं यसबाट प्राप्त गर्न सक्दछौं।
सबैभन्दा पहिले हामी तपाईंलाई परियोजनाको कार्यान्वयनका लागि रेखाचित्रहरूको पूर्ण सेट प्रदान गर्नेछौं। तपाईं हाम्रो चित्रहरू बुझ्नुहुन्न भन्नेमा चिन्तित हुनुहुन्छ। तिनीहरूको डिजाइन बुझ्न को लागी सजीलो छ, नौसिखाहरु को लागी जो पौंडी पोखरीहरु निर्माण गर्दैछन्।
दोस्रो, हामी स्विमिंग पोखरी र पम्प कोठामा स्थापना गर्न फिल्टर प्रक्रिया उपकरणहरूको पूर्ण सूची पनि प्रदान गर्दछौं।
तेस्रो, सम्पूर्ण निर्माण र स्थापना टेक्निकल समर्थन। तपाईं पौंडी पोखरी निर्माण गर्ने सीपको अभावबाट डराउनुहुन्छ। आवश्यक भएमा, हामी तपाईंलाई प्राविधिक समर्थन प्रदान गर्न कामको बखत हुनेछौं।
संक्षेपमा, एक पटक तपाईं GREATPOOL डिजाइन परियोजनामा ​​भाग लिनुभयो भने, तपाईंले तपाईंको पौंडी पोखरीले कसरी काम गर्छ भनेर बुझ्न सक्नुहुनेछ; हाइड्रोलिक रेखाचित्रले पाइपहरूको स्थान स्पष्ट रूपमा देखाउँदछ, र पम्प कोठामा सबै भल्भ र उपकरणहरू उल्लेख गरिएको छ
एक पौंडी पोखरी चित्र समावेश छ
तपाईंको प्रोजेक्टको अवस्था: हामी तपाईंलाई स्थलाकृतिक नक्शामा आधारित स्विमिंग पूलको ठ्याक्कै स्थान देखाउनेछौं।
पौंडी पोखरीको डिजाइन
यो चित्र को लागी धन्यवाद, तपाई स्ट्रक्चरल इन्जीनियरिंग सही तरीकाले प्रदर्शन गर्न सक्नुहुनेछ। त्रुटिहरू जोगिन सबै मापन मानहरू संकेत गर्नुहोस्। यो खण्डले पानीको विभिन्न गहिराई र पौंडी पोखरीमा जाने सीढीहरू स्पष्ट रूपमा देखाउँदछ।
ओभरफ्लो ट्रफ र गटरको डिजाइन चिन्ह लगाईन्छ; सामान्यतया, हामी विस्तृत जानकारी संलग्न गर्नेछौं ताकि कामदारहरू राम्रोसँग बुझ्न सक्दछन्।
हाम्रो अनुभवले देखाउँदछ कि र colorको प्रयोगले रेखाचित्रलाई अझ पढ्न योग्य बनाउँदछ; यो अनन्त पोखरीको लागि विशेष गरी सही हो।
संक्षेप मा, हाम्रो प्रत्येक विवरण तपाइँको पौंडी पोखरी को चित्रण को अनुभूति को लागी महत्वपूर्ण छ।
पूलबाट उपकरण कोठा सम्म
पोखरीको सामान्य योजनामा, हामीले पोखरीका सामानहरू र उपकरण कोठामा जोड्ने विभिन्न पाइपिंग लेआउटहरू बनाउँदछौं।
सजिलैसँग बुझ्नका लागि, हामी बिभिन्न रंगहरू प्रयोग गर्‍यौं र प्रत्येक सहायकहरूको स्थानमा सही रूपमा चिन्ह लगाएका छौं; त्यहाँ त्रुटि को कुनै जोखिम छैन।
प्लंबरको कामलाई सजिलो बनाउनको लागि हामीले स्विमिंग पुल छोडेर सबै पाइपहरू व्यवस्थित गरेका छौं।
अन्तमा, यस पाइपिंग सजावटले तपाईंलाई प्रत्येक पाइपको स्थान थाहा दिन सक्छ; यो कुनै दिन उपयोगी हुन सक्छ।
फिल्टरेशन को मुटु मा
उपकरण कोठा कहिलेकाहीं पोखरी पेशेवरहरूले बेवास्ता गर्दछन् किनकि यो अदृश्य छ; यद्यपि यो तपाईंको स्थापनाको मूल हो। यसको लागि धन्यवाद, तपाईंको पोखरीको पानी सफा र राम्रोसँग उपचार गरिनेछ। अनन्त पोखरीमा, सुरक्षा उपकरणहरू स्थापना गर्नु पर्छ।
कोठाको सटीक आकार अनुसार डिजाइन गरिएको ड्राइंग पम्प कोठामा सबै पाइपहरू, आवश्यक भल्भहरू र उपकरणहरू देखाउँदछ। आवश्यक भल्भहरू प्रदान गरिएको छ र तिनीहरूको स्थानहरू स्पष्ट रूपमा चिन्ह लगाइएको छ। प्लम्बर मात्र योजना अनुसरण गर्न आवश्यक छ।
पौंडी पोखरीको मालिकको रूपमा यो योजनाले तपाईंलाई फिल्टर प्रक्रिया ठीकसँग प्रबन्ध गर्न अनुमति दिन्छ।
पौंडी पोखरी योजनाहरू प्राप्त गर्नका लागि चरणहरू
एकचोटि छलफल गर्नुहोस्, र कागजातहरू पठाउनुहोस्, जस्तै प्लाट योजनाहरू, वातावरणीय फोटोहरू, र भविष्यको पौंडी पोखरी दृश्यहरू।
२. अवधारणा योजनाको रिलीसेसन
हामी तपाईंको भूमि र यसको वातावरणको लागि उपयुक्त कार्यात्मक वास्तविकता महसुस गर्न तपाईंको इच्छा र सपनाहरू विचार गर्नेछौं। यो वैचारिक योजना सबै चित्रका लागि सुरूवात बिन्दु हो, र हामी तपाइँसँग यसका बारेमा छलफल गर्न हामी सबै समय खर्च गर्दछौं।
तपाईं डिजिटल पीडीएफ ढाँचामा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ, सबै स्विमिंग पूल रेखाचित्रहरू निर्माण गर्न सक्षम हुन वा तपाईंको पूल पूर्ण शान्तिको साथ निर्माण गर्न सक्षम हुन। हामी फिल्टरेशन सामग्रीको एक मात्रा थप्छौं (भागहरू बन्द गर्न, उपकरण, ...)
A. पौंडी पोखरी रेखाचित्र पछि
यदि तपाइँ चाहनुहुन्छ भने, हामी समर्थनका विभिन्न प्रकारहरू प्रदान गर्नेछौं। तपाईं यहाँ यी सेवाहरूको बारेमा जान्न सक्नुहुनेछ।
पौंडी पोखरी को बारे मा FAQ
तपाई कुन देशमा काम गर्नुहुन्छ?
हामी अनलाइन काम गर्दछौं र तपाईंलाई मद्दत गर्न यात्रा गर्न आवश्यक छैन। त्यसकारण, हामी विश्वव्यापी रूपमा काम गर्दछौं।
के म तपाईंको चित्रको साथ उद्धरणहरू अनुरोध गर्न सक्षम हुनेछु?
अवश्य! हाम्रो लक्ष्य यो हो कि तपाईंले आफ्नो पौंडी पोखरीको प्रभारी लिनुहुनेछ। हाम्रो रेखाचित्र र उपकरणको मात्राको साथ, कुनै पनि मेसन र प्लम्बरले तपाईंलाई एउटा उद्धरण दिन सक्छ। अवश्य पनि, हामी तपाईंलाई केही कारीगरहरूको उद्धरणहरू अनुरोध गर्न सल्लाह दिन्छौं ताकि तपाईं तुलना गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईं आफैं उपकरणहरू किन्न पनि प्रस्ताव गर्न सक्नुहुन्छ।
मैले वास्तुकार योजना पाएको छु; तिमी मलाई अरू के दिन सक्छौ?
आर्किटेक्टद्वारा प्रदान गरिएको योजनाहरू सामान्यतया असभ्य चिनाई योजनाहरू हुन्; ती कहिलेकाँही ओभरफ्लो पोखरीको लागि विस्तृत विस्तृत जानकारी समावेश गर्दछ, तर धेरै थोरै। थप रूपमा, पाइप, फिटिंग र फिल्टरहरूको स्थापना संकेत गरीएको छैन। हामीलाई तपाईंको योजना पठाउनुहोस् र हामी तपाईंलाई कसरी मद्दत गर्न सक्दछौं बताउनेछौं।
सार्वजनिक पौंडी पोखरी समाधान, पौंडी पोखरी समाधान, पौंडी पोखरी, पौंडी पोखरी सेवा, पौंडी पोखरी परियोजना, छत पुल सामान,